Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » ProCare Health oo ay heshay Clinigence Holdings
Clinigence Holdings, Inc., oo ka mid ah hormuudka teknolojiyadda qaranka ee karti u leh, shirkadaha maareynta caafimaadka dadweynaha ee halista ku jira, ayaa maanta ku dhawaaqay inay dhammaystireen helitaanka ProCare Health, Inc.
Iyada oo ku saleysan Garden Grove, California oo la aasaasay 2011, ProCare waa hay'ad hoggaamineed adeegyada maareynta ("MSO") oo hadda adeegyo siisa hal urur dayactir caafimaad ("HMO") iyo saddex urur dhaqtar oo madaxbannaan ("IPAs") ee Koonfurta iyo Waqooyiga California. MSOs waa ururo ganacsi oo bixiya kaabayaasha maamul ee lagama maarmaanka ah iyo teknolojiyadda loogu talagalay IPA-yada halista u leh inay si guul leh ugu shaqeeyaan cilaaqaadkooda ay la leeyihiin lacag-bixiyeyaasha qandaraaska iyo hay'adaha sharciyeynta. MSOs waxay awood u siiyaan ururada dhakhaatiirta inay ku guulaystaan ​​mala awaalka khatarta maaliyadeed iyo dadweynaha, si loo hagaajiyo waxqabadka ururka ee bixinta daryeelka iyo inay bixiyaan falanqaynta xogta wax ku oolka ah. ProCare waxay bixisaa maamulka sheegashooyinka, u -hoggaansanaanta, aqoonsiga, maareynta tayada, maareynta adeegsiga, qandaraas bixinta, xiriirka bixiyaha, adeegyada xubnaha, maareynta daryeelka, hagaajinta koodhka iyo adeegyada warbixinta maaliyadeed, adeegyada kale.
Sida waafaqsan heshiiska heshiiska iibsiga saamiyada, Clinigence waxay siisay 759,000 saamiyo cusub oo saamiyo caadi ah kuwa haysta saamiyada ProCare markii la xirayay iyadoo lagu beddelayo 100% dammaanadaha sinnaanta ee ProCare. Intaa waxaa sii dheer, qaab -dhismeed lacag -bixin ayaa la diyaariyey si loogu abaalmariyo ProCare qandaraasyada cusub ee MSO mustaqbalka.
“Helitaanka ProCare waa qayb ka mid ah istaraatiijiyadeena kobaca ee socota waxayna noo oggolaanaysaa inaan sii ballaarino faylalkayaga qeybta MSO,” ayay tiri Warren Hosseinion, MD, Guddoomiyaha iyo Madaxa Fulinta. "Waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno kooxda ProCare, oo khibradooda iyo hamigooda ay xoojin doonaan shirkadeena."
"Waxaan ku faraxsanahay inaan ku biirno Clinigence, oo kooxdeeda maamulku ay leedahay in ka badan 100 sano oo waayo -aragnimo ah oo la isku daray," ayuu yiri Anh Nguyen, Aasaasaha iyo Madaxa Fulinta ee ProCare Health. "ProCare waxay safka hore kaga jirtaa daryeelka la maareeyey, oo diiradda saareysa maareynta adeegsiga, isku-dheellitirnaanta cudurrada la isku habeeyey iyo ka caawinta bixiyeyaasha bixinta daryeel tayo leh bukaannadooda."